Nhau - Precision vachikanda vagadziri vanotsanangura maitiro esilica sol vachikanda zvakadzama!
Ikozvino mari yekudyara chaiyo kukanda maitiro kuri kukura nekukurumidza, uye inozivikanwa nekuda kwekunakidzwa uye kwakachena chitarisiko. Zvinoenderana nezvazvino kuitika, zvikamu zvigadzirwa zvinogadzirwa nemazvo kukanda mune ramangwana zvichave zvakanyanya kuwedzera. Iyo yetsika isina chinhu tekinoroji ikozvino Pasi pekusimudzira kwemusika, zvishoma nezvishoma inobviswa. Mazuva ano, izvo zvinodiwa zvehunhu uye maitiro ekudawa kwekukanda zvigadzirwa mumusika zviri kuramba zvichikwira, hunyanzvi hwehunyanzvi hunodiwa huri kuwedzera nekukwirisa, uye kudiwa kwekudyidzana kwenyanzvi kuchangokwira chete.
Zvemhando yekukanda vagadziri, iyo yazvino inozivikanwa maitiro inofanirwa kunge iri yesilica sol chaiyo yekukanda maitiro Zvino chii chiitiko cheichi chiitiko? Iyo yekutanga maitiro ndeinotevera:
Kugadzira castings, kunyatso kukanda vagadziri vanofanira kutanga vagadzira mafuru. Asati ashandisa chaiwo maitiro, vagadziri vanogadzira uye vanovaka prototypes zvinoenderana nemadhirowa anopihwa nemushandisi, uye vozogadzira mafomu zvinoenderana nemadhirowa.
Sungunusa wakisi yekuumbwa ive mamiriro emvura, uye wozoidururira mumudziyo wekuchengetedza kupisa. Ngatisimukei kuti tibvise mvura nekusara kwetsvina, wobva wawedzera wakisi nyowani kusvikira vhoriyamu iri mukati yasangana nezvinodiwa muforoma yatinoda, uye wozodurura wakisi muforoma yapfuura, mirira wakisi kuti itonhore uye isimbe, uye ibudise . Ita kucheka kuti uone kana ichizadzisa chiyero. Kana ikasasangana neyakajairwa, inozobatwa sechigadzirwa chemarara, uye nhanho yekukwirisa ichatanga zvakare.
3. Kugadzirwa kwegoko
Darika iwo wakisi mhando inosangana nezvinodiwa kuburikidza ne-pamusoro-pete slurry, kuomesa, kuvhara, uye nekuomesa.
Iyo goko rakagadzirirwa mudanho rapfuura rakakangwa uye rinogona kukamurwa kuita zvikamu zviviri: solid solution uye bhuremu rekuvhara kwekudira. Mushure mekunge zvikamu zviviri izvi zvapedziswa, goko rinotonhodzwa uye kubviswa, uye ndokusimudzwa uye kuchekwa risati radzokera kuchoto.
5. Geza nekugadzirisa
Isa iyo simbi zvinhu muhydrofluoric acid uye iseke iyo, uye wozoenda kuburikidza nematanho ejecha, kubviswa kwepakati uye kupfura kuputika, uyezve kuitisa kwechipiri kuongorora. Kana paine chigadzirwa chemarara, danho rekudira rinodzokororwa.
Post nguva: Chivabvu-06-2021